के हेरेको ? वेबसाईट बनाएर पैसा कमाउने होईन ?
नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गरेको गलत समाचार र त्यसले निम्त्याउन सक्ने दुर्घटनालाई ? मध्यनजर गर्दै के तपाईं “Online News Portal Website / Mobile App” ? बनाउन चाहनुहुन्छ । यदि हो भने हामी सँग मिलेर “Online News Portal” ?को व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् र महिनामा ??५० हजार भन्दा धेरै पैसा ग्यारेन्टि कमाउनुहोस् ???। तपाईं हामीसँग वेबसाईट गराउनुहोस्, तपाईँको ?कमाई गराउने जिम्मा हाम्रो हो । त्यसको लागि तपाईँले पहिलो कदम चाल्न अाज होईन अहिल्यै हामीलाई ? ९८१४५८१२४८ मा फोन गर्नुहोस् ।
? तपाईँको कमाई कसरी हुन्छ त ?
= मानौं, तपाईैले हामी सँग एउटा “Online News Portal” ? बनाउनु भयो र त्यसमा ताजा समाचार ? हरु राख्नु भयो भने तपाईंको मा मानिसहरु? समाचार पढ्न अाउँछन् । हिन्दीमा एउटा उखान छ नि “जिस्के पास जनता हे,उस्कि दुनियाँ सुन्ता हे ?“ । मतलब, जो सँग धेरै मानिसहरुको समूह छ, उसको कुरा पुरा दुनिँयाले ? सुन्छ । त्यस्तै हो, यदि तपाईंको मा दैनिक १,००० ?जनाले अाएर समाचार पढेभने, तपाईँको वेबसाईटमा अन्य ? कम्पनि,कन्सल्टेन्सिहरुले विज्ञापन?? गर्न खोज्छन् । यदि मानौं तपाईंले एउटा विज्ञापन अाफ्नो वेबसाईटमा राखेको ५,००० ? रुपैंया लिनुहुन्छ अनि तपाईंको वेबसाईटमा धेरै भिजिटरहरु अाएभने अरु पनि कम्पनिले अाफ्नो व्यापार बढाउन विज्ञापन गर्छ ?र यसरी तपाईंले सजिलै सँग मासिक रु. २०-२५,००० ??? कमाउन सक्नुहुनेछ ।
? मैले कस्तो समाचार राखें भने मेरो वेबसाईटमा विज्ञापन हरु अाउँछ त ?
तपाईंलाई त थाहा भएकै कुरो हो, नेपाली विद्यार्थी ? विदेशमा गएर अध्धयन ? गर्न चाहन्छन भनेर । यदि तपाईंले अाफ्नो वेबसाईटमा वैदेशिक शिक्षा ?भन्ने शिर्षकमा सुचना र समाचार ?हरु राख्नु भयो भने विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुले ?अवश्य हेर्नेछन् । यदि विद्यार्थीहरु धेरै अाएभने कन्सल्टेन्सीहरुको विज्ञापन?? अवश्य अाउँछ ,अाफ्नो व्यापार बढाउन खोज्नको लागि । यसरी कन्सल्टेन्सीको व्यापार पनि बढ्यो,तपाईंको व्यापार पनि भयो । जता हेर्यो फाईदै,फाईदा । ???
नि-शुल्क डेमोको लागि : ? http://utmsocialmedia.com मा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ।
✅ प्रोजेक्ट नाम : Online News Portal Website / Mobile App
✅ मुल्य : रु.९,९९९ ।-
Ad ID : 1231